प्रवास « Seto Page
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शुक्रबार दक्षिण छिमेकी भारतको तीन दिने भ्रमणका लागि जाने भएका छन् । उत्तरी छिमेकी चीनबाट उच्चस्तरीय नेपाल भ्रमण भएको एक साता बित्न
परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले युक्रेनको सार्वभौमसत्ताको पक्षमा नेपाल उभिएको बताएका छन् । सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले युक्रेनको पक्ष लिनु भनेको युद्धको पक्ष लिनु नभएको प्रस्ट पारे ।
रुस-युक्रेन युद्धको दशौं दिन सम्म के-के भयो ?
आज युक्रेन-रूस युद्धको दशौं दिन हो। गत २४ घण्टामा के के भयो थाहा पाउनुहोस्:-ब्रसेल्समा नेटो देशका विदेश मन्त्रीहरूसँग भेट गरेपछि गठबन्धनका महासचिव येन्स स्टोल्टेनबर्गले गठबन्धनले युक्रेनमाथि उडान प्रतिबन्ध क्षेत्र स्थापना
५११ जना नेपाली युक्रेन छाडेर सुरक्षित गन्तव्यमा
युक्रेन द्वन्द्वका क्रममा युक्रेनमा फसेका नेपाली सुरक्षित स्थानमा पुग्ने क्रम जारी छ । हालसम्म ५११ जना नेपाली नागरिक द्वन्द्वग्रस्त युक्रेन छाडेर सुरक्षित गन्तव्यसम्म पुग्न सफल भएका छन् । रुस–युक्रेन द्वन्द्व
आफ्नै स्रोत नहुँदा विदेशीको भर
सरकारको खर्च जुटाउने मुख्य स्रोत हो राजस्व। चालू आर्थिक वर्ष १० खर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य छ। तर, जति उठ्छ त्यसको करिब ६० प्रतिशत सरकारी खर्चमै सकिन्छ। यो वर्ष ऋणको साँवा,
के छ युक्रेनमा रहेका नेपालीको अवस्था ? : गैरआवासीय नेपाली संघको प्रेस विज्ञप्ति
रुस – युक्रेन द्वन्द्व प्रभावित २ सय ४४ जना नेपालीहरु सुरक्षित रुपमा आफ्नो गन्तव्यमा पुगेका छन् । ‘रुस – युक्रेन द्वन्द्व प्रभावित नेपालीको सहयोग एवं उद्धार उच्चस्तरीय समिति’ का अनुसार
त्रसित अवस्थामा ज्यान जोगाउने मेलो गर्दै युक्रेनमा रहेका नेपाली
युद्धमा होमिएको युक्रेनबाट नेपाली फर्कने क्रम जारी छ तर त्यहीं स्थायी रूपमै वर्षोंदेखि बसिरहेका नेपालीहरू भने त्रसित अवस्थामा ज्यान जोगाउने मेलो गर्दै छन्। राजधानी किभको सडकमै उत्रिएर रूसी सेनाहरूले अन्धाधुन्ध
युक्रेनमा रहेका नेपालीहरुको उद्धार जारी
लगातार दूतावास वा नेपाली समुदायको सम्पर्कमा रहे पनि नयाँ देश पुग्नेवित्तिकै सम्पर्क टुट्ने भएकोले युक्रेनबाट जोगिएर छिमेकी देश स्लोभाकिया, पोल्याण्ड, रोमानिया लगायतका देशमा पुग्ने गरेका अन्य नेपालीलाई सहयोग जुटाउन समस्या